The kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem Na Switzerland Na Summer | Save A Train
Home > Travel Europe > The kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem Na Switzerland Na Summer
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 30/12/2019)
Ọ pụrụ ikwu na Switzerland na-kasị mma-mara maka ya snowy ọnụ ọnụ na-atọ ụtọ chocolate, ma e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị mara mma obodo karịa osobo anya. Train Njem na Switzerland bụ otu n'ime ụzọ kacha mma na-enweta mara mma obodo. Mee ka ọtụtụ n'ime gị oge e. The ọkụ ihu igwe eme ka gị njem ọbụna ihe na-atọ ụtọ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mara mma agbaga Train Njem na Switzerland na Summer.
The glasia Express n'etiti St. Moritz na Zermatt bụ otu n'ime Train Njem na Switzerland
Nke a bụ eleghị anya, otu nke kasị mma mara nke Swiss sinik ụgbọ oloko na ezi ihe kpatara. The ụgbọ okporo ígwè njem n'etiti St. Moritz na Zermatt via Chur, Andermatt, na Brig. Ọ bụ a ụbọchị zuru ụgbọ okporo ígwè eme njem ma ọtụtụ ndị na-ahọrọ ime ya a di na nwunye nke ụbọchị. Ha na-eji oge ụfọdụ dị iche iche ebe n'ụzọ. Summer bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'oge na-aga na e nwere ndị na-anọ njem kwa ụbọchị ihe a oge. The kasị sinik akụkụ nke a ụgbọ okporo ígwè njem bụ ngalaba n'etiti Chur na St. Moritz. Ebe ị ga-aga n'elu mgbe-photographed Landwasser viaduct na-agwụ na a ọwara.
The Golden Pass Line na Geneva
Ọ dịghị Train Njem na Switzerland ga-ezu na-enweghị a na-agba ịnyịnya na Golden Pass Line. The ụgbọ okporo ígwè na-aga site Lake Lucerne na Geneva ma ọ bụ site na Zurich na Geneva maka ndị nwere obere oge na aka-ha. Onye ọ bụla njem bụ nnọọ akpali akpali dị ka ndị ọzọ. E nwere echiche nke asatọ nke Switzerland si ebube-acha anụnụ anụnụ na ọdọ mmiri, atọ ugwu gafee na n'etiti abụọ asụsụ na mpaghara (French na-asụ German Switzerland). Inweta dum njem na-achọ ịmafe ụgbọ oloko ọtụtụ ugboro ma nlegharị anya na-ọma kwesịrị ya. Njem mkpa doputa ha oche na ụfọdụ nke ụgbọ oloko na ụgbọala. Jide n'aka na- buru ụzọ hazie n'ihi na nke a na njem!
Jungfraujoch Top nke Europe
Ọ bụ ezie na o nwere ike ịbụ Noua na Switzerland na ị na-aghaghị ịhụ ndị a ma ama na-acha ọcha ọnụ ọnụ nile n'afọ na ọ bụrụ na snowy ugwu ihe ị chọrọ karịa Jungfraujoch ojii bụ ebe mkpa ka ị gaa na. Nke a bụ ndị kasị elu ebe na Europe na ike na-ruru site akụta a ụgbọ okporo ígwè si Kleine Scheidegg. The echiche si n'ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland bụ ihe pụrụ iche na ndị njem na-e bụ zuru okè Mee-ruo akwa n'ikpeazụ. Njem a bụ maa otu ịgbakwunye na ndepụta.
E nwere ọtụtụ ịrịba ụgbọ okporo ígwè njem na-ma ndị a bụ n'etiti n'elu kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem na Switzerland na-abịa Summer. Gịnị mma ụzọ enwe anwụ ma na-na ebube nke a mara mma mba karịa ụgbọ okporo ígwè? Anyị nwere ike na-eche nke a ọzọ n'ụzọ zuru okè na-ahụ Switzerland ka zọpụta ụfọdụ ego na ụgbọ okporo ígwè njem.
Ntinye akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi maka European njem? Ọ gaghị 3 nkeji na anyị na saịtị na-ahụ ndị dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland maka ụgbọ oloko gị njem. Nbanye anyị na saịtị ugbu a ka akwụkwọ azụ tiketi.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-most-scenic-train-trips-in-switzerland-in-summer%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
SwissAlps Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem travelswitzerland